Iintlanzi | Tyelela uHultsfred
Usuku lokuloba olungenamoya ngaphandle emanzini, imitha yelanga ifudumele… ngokuqinisekileyo yintlanzi entle? Unikezelo lwamanzi okuloba alunasiphelo kwaye umahluko mkhulu kumasipala wethu. Nantsi ipherch, i-pikeperch, i-pike, i-carp kunye ne-tench ukubala ezimbalwa. Fumana indawo oyithandayo yokuloba kwaye uzive usasazekile emzimbeni wakho ngelixa ulinde i-pacifier!
IHulingen ibekwe kwindawo esecaleni kwendawo yedolophu yaseHultsfred. Eyona ndlela ilula yokufumana eli chibi kukuqhuba ukuya kwinkampu kaHultsfred, etyikitywe kwiziko. Ecaleni kwenkampu
Skärveteån kunye neNarrveten
Ukuloba entlango kumanzi aqukuqelayo. Ubungakanani beLake Ubunzulu obuphezulu Ubunzulu obuphakathi Iindidi zeentlanzi I-Perch Pike Sutare Benlöja Ichibi
Umama lelinye lamachibi amane aqeshisa iVirserums SFK. Iklabhu iyathengisa
IBysjön imi malunga neekhilomitha ezili-15 kumzantsi-ntshona weHultsfred. IBysjön lelinye lamachibi ayinxalenye yeFlatens Fiskevårdsområde kwinkqubo yamanzi eGårdvedaån. Uya kufumana
IStensjön lichibi elihle nelinoxolo elibekwe kude lee malunga neekhilomitha ezili-10 kumzantsi-ntshona weHultsfred. Inxalenye ye-FVO kaStora Hammarsjön
Elona chibi likhulu kwindawo ekuthiwa yiGreat Hammar Lake - ichibi elihle elinexabiso eliphezulu lokuloba kwezemidlalo kunye namathuba ophuhliso amahle. IStora Hammarsjön lichibi lokwenene eliyintlango kwaye lincinci
IHesjön yenye yamachibi angama-20 ayinxalenye yeStV Hammarsjön's FVO. Indawo iyaqeshiswa kwaye ilawulwa yi-SFK Kroken eHultsfred. NGAPHAKATHI
I-Alegöl okanye i-Ålegöl, njengoko isitsho kwiimephu, yindawo entle yomnyama. IGölen imi malunga neekhilomitha ezi-5 kumazantsi eHultsfred kwaye uyifumene
ILilla Åkebosjön imi kumantla eStora Åkebosjön eStora Hammarsjön's FVO kwaye amachibi adityaniswe ngomjelo. Ukuba uya ngasentshona ukusuka
IVälen imi embindini weStora Hammarsjön's FVO, malunga neekhilomitha ezisi-7 kumzantsi-ntshona weHultsfred. Eli chibi lilawulwa yi-SFK Kroken, ethi ikhuphe rhoqo
Ichibi leCARP elinophawu lwasentlango. QAPHELA: Unokuloba kuphela echibini njengelungu le-SFK Kroken. IStockebrogöl imi kwimpuma yeStora Hammarsjön,
I-lenglegöl imi phakathi kweMarlilla neVirserum, ecaleni kwendlela 23. Ichibi ngomnye wemizekelo emihle yendlela yokwenza umtsalane
ILysegöl lichibi elibunjiweyo elikwihlathi leSmåland. IGölen imi emazantsi eVirserum kanye ecaleni kwendlela 23. Amanzi abhalwe umqondiso
IVirserumssjön lichibi elinzulu kwaye elingenazakha-mzimba elikufutshane noluntu lwaseVirserum. Ichibi kunye neendawo ezisemaphandleni zihle kwaye zininzi ekunokubonelelwa ngazo kubakhenkethi abajikeleze ukuloba kwezemidlalo,
Emån-Klövdala ukuya eRyningsnäs
Ukolulwa kwesibini kukaEmån. Eli candelo lisuka eKlövdala nguJärnforsen liye eRyningsnäs. Umlambo ujikelezwe lihlathi kunye nedlelo. Umlambo wahlukile
IJärnsjön imi kwintshona yeJärnforsen kwaye ihanjwa ngu-Emån. Eli chibi liyinxalenye yeJärnforsen's FVO. Ichibi elincinci elincinci kunye neendawo ezikufutshane
IMelsjön lichibi elincinci elinzulu kwaye amanzi lulwandiso lweGårdvedaån. Ime kumantla eLake Flaten kwintshona yeMålilla kunye
Iflethi yindawo edumileyo yokuloba imidlalo, ubuncinci ngabakhenkethi bokuloba ngaphandle kwezemidlalo. Ime malunga ne-15 km kumazantsi-ntshona eHultfred ecaleni kwendlela ephakathi kweMarlilla kunye
ISkiren lichibi elincinci nelinzulu eliyinxalenye yeFlatens FVO kunye nenkqubo yamanzi yaseGårdvedaån. I-Flatens FVO ibandakanya amachibi eGarpen, Skiren, Övre Vrången,
I-revre Vrången yinxalenye yeFlatens Fiskevårdsområde. Eli chibi likumantla mpuma eVirserum. Eli chibi lehlathi elinotyani obunqabileyo ngaphandle kwangaphakathi kulo
IGnötteln yindawo enamanzi ecacileyo engenazondlo. Njengoko ichibi likwindawo yomhlaba wezolimo, ichibi lingaqhelekanga kummandla onamanzi acacileyo.
Emån, Nyboholm ukuya eKlövdala
Ubude be-Emån bumalunga ne-22 km. Umlambo uqala kumasipala waseNässjö kwaye ungena elwandle kumda ophakathi kweOskarshamns- neMönsterås